Kedu ihe bụ nuklia nuklia? Ihe niile ị chọrọ ịma | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Kedu ihe bụ nuklia nuklia? Ihe niile ị kwesịrị ịma
Portillo nke German | | Ike nuklia
O doro anya na ị maara ike nuklia ị makwaara na e si na ya mepụta ike eletrik. Agbanyeghị, ị gaghị ama etu o si arụ ọrụ, otu esi akpụpụta yana uru na ọghọm dị na ya. N'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya na ịkọwa ihe niile metụtara ike nuklia, site na ihe ọ bụ otu o si arụ ọrụ na uru ya.
You chọrọ ịmụtakwu banyere ike nuklia? Nọgide na-agụ ka ịmatakwu.
1 Kedu ihe bụ nuklia nuklia?
2 Kedu esi eweputa ikike nuklia
3 Osisi ike nuklia na onu ogugu ndi mmadu
4 Ihe ize ndụ nke osisi ike nuklia
5 Uru nke ike nuklia
Kedu ihe bụ nuklia nuklia?
A makwaara ikike nuklia dị ka ikike atomiki na ọ bụ nke enwetara site na mmeghachi omume nuklia. Nuclei na atom atom bụ ndị na-akwado ọrụ a. Mmeghachi omume nwere ike ime ma na-enweghị isi ma na-emetụta mmadụ. N'ihi ya, nke a na ụdị ike bụ nnọọ oru oma.
Ojiji ya nwere ụfọdụ ihe egwu ọ dị mkpa ịmara n'ụzọ miri emi iji chekwaa nchekwa, maka ndị ọrụ yana maka obodo dum. Ike nuklia bu ihe eweputara n'ime ato. N’ime atọm ọ bụla, e nwere ụdị ihe abụọ a na-akpọ neutron na proton. Elektrọnik na - agagharị na ha mgbe niile, na - enye ọkụ eletrik. Iji nweta ọkụ eletrik site na ike, ị ga-ahapụ ike ahụ site na ntọala atọm. Enwere ike ime nke a site na ngwakọta nuklia ma ọ bụ Nkọwa nuklia. A na-eji nuklia nuklia na ụlọ ọrụ ike nuklia dị ka usoro maka ịmepụta ọkụ eletrik.
Ike a abughi nani uru maka imepụta ọkụ eletrik, mana enwekwara mpaghara ndị ọzọ dịka ọgwụ, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwa ọgụ, onye ike nuklia bu ihe di oke mkpa.
Kedu esi eweputa ikike nuklia
Dịka anyị kwurula, e mepụtara ike nuklia site na usoro nke ikuku na njikọta. Ọnụ ọgụgụ nke ike nke a pụrụ inweta site na usoro ndị a dị ukwuu karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụ ahaghị nhata n'okwu ahụ n'oge mmeghachi omume nke na-emepụta ume.
Enwere ike ịsị na na mpaghara a, obere ọnụọgụ ike nwere ike inye nnukwu ume. Iji nye otu ihe atụ ma ghọta onwe anyị nke ọma, oke ike otu kilogram nke uranium nwere ike rụpụta na nke ga-eweta tọn 200 coal.
Ka i si hụ, ihe dị iche n’etiti ike ọgbọ na-adọrọ mmasị. Nke a na - eme ka ọ bụrụ otu n'ime ume dị ọnụ ala, mana yana ihe egwu ụfọdụ a ga - elebara anya.
Osisi ike nuklia na onu ogugu ndi mmadu
Beingsmụ mmadụ ejirila ike nuklia nweta ọkụ eletrik ruo oge ụfọdụ. Maka nke a, a rụpụtala osisi ike nuklia ma, na Spain, anyị nwere Kọmitii Nchedo Nuklia (CSN) nke bụ ọrụ ya maka inyocha arụmọrụ niile ma hụ na nrigbu nke ụdị ike a bụ nchekwa dị ka o kwere mee.
Ma ọ bụ na ekele ndị na-arụ ọrụ nuklia nwere ike ime mmeghachi omume na-achịkwa. Iji mepụta ọkụ eletrik, osisi ike nuklia na-eji ihe a na-akpọ ihe fissile na mmeghachi omume nuklia iji nye okpomọkụ. Okpomoku a na-eji ihe omimi nke thermodynamic mee ihe iji kpoo onye ozo na ike eletrik. Nke a bụ ọrụ otu ụlọ ọrụ nuklia na-ahụkarị.
Ihe kachasị mma bụ na osisi na-eji ihe ndị dị ka uranium na plutonium. Ọ bụ ezie na mmeghachi omume ndị a na mmepụta ume anaghị emepụta gas na-emetọ ikuku, ha na-ewepụta ihe mkpofu redio nke na-emetọ ma dị oke egwu. Usoro ọgwụgwọ ya ziri ezi bụ nchekwa ya na ụlọ nkwakọba ihe ndị dịpụrụ adịpụ ma na-achịkwa.
Mgbe ị na-eji isi iyi nke ike sitere na ihe ọkụkụ, ọ ga-adịgide adịgide ruo ogologo oge enwere ike ịmegharị ya yana naanị ihe atọ mezuru ọnọdụ ahụ. Uranium 233, Uranium 235 na Plutonium.
Enweghị ndị na-arụpụta nuklia, agaghị enwe ike iji ihe a mepụta ọkụ eletrik. Inside na chernobyl bụ mmanụ ụgbọala na ọ bụ ebe a na-achịkwa fission-ewe ebe.
Ihe ize ndụ nke osisi ike nuklia
Dịka anyị gosipụtara ọtụtụ oge, ike nuklia dị ọnụ ala mana ọ na-ebute ụfọdụ ihe egwu. Ha nwere ọrụ maka anwuru emetọ emetọ sitere na iwu na imepụta mmanụ ọkụ n'onwe ya yana njikwa njikwa nke ihe mkpofu redio. A na-atụba ihe mkpofu ndị a n'ime osimiri na enweghị nchịkwa n'ọtụtụ oge.
Ọ bụghịzi naanị nsị na-emetọ mmiri na ala dị egwu. Ọ bụrụ na ị nwere mmeghachi omume nuklia na-adịghị achịkwa, ọdachi dịka ihe ọghọm Chernobyl na Fukushima na ihe ọghọm ndị ọzọ emetụla n’akụkọ ihe mere eme.
Uru nke ike nuklia
Mgbe anyị chere echiche banyere ike nuklia, anyị na-eche maka ya dịka ike dị ike ma dịkwa oke egwu na njikwa. Ọ bụrụ na ị na-ekwu maka ya, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere iche echiche banyere bọmbụ atọm nke Hiroshima na Nagasaki na ọdachi ndị dị na Chernobyl na Fukushima. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile dị njọ na osisi ike nuklia. Enwere ọtụtụ elele na iji ike a.
N'adịghị ka nkwenkwe a ma ama, ọ bụ a dị ọcha dị ọcha na-adịghị achọ ka fosil fuels. Ọ bụrụ na a na-ejikwa ihe mkpofu redio na-achịkwa nke ọma, ọ naghị ewepụta ụdị mmetọ ọ bụla. Nke a na-enye aka n'ibelata ikuku na-emetọ ikuku na okpomoku ụwa.
Nkwa ya nke inye ọkụ eletrik na-adịgide adịgide, ya bụ, ọ na-enye anyị ọkụ eletrik elekere 24 kwa ụbọchị, ụbọchị 365 n’afọ.
Dika mmeputa ya na adi mgbe nile, onu ahia na adi kwa mgbe. Mmanụ dị n'okpuru mkpebi nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na ọnụahịa ya na-agbanwe mgbe niile.
Ike nuklia dị ọnụ ala ọ bụrụ n’iburu n’uche ike ọ ga - ewepụta. Iji mepụta ike nuklia, obere ihe akụrụngwa dị mkpa (uranium ma ọ bụ plutonium) yana nsonaazụ nchekwa na ihe (uranium na-anọchite ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mmefu iji mepụta ike nuklia) kamakwa na njem, nchekwa, akụrụngwa maka mmịpụta, wdg.
Ọ dabereghị n'okike ma ọ bụ gburugburu ebe obibi dị ka ume ọhụrụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ike nuklia zuru oke ma, ọ bụ ezie na a na-echekwu ya gbasara radieshon na kansa, ọ bụ ezigbo nhọrọ iji zere okpomoku ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Ike nuklia » Kedu ihe bụ nuklia nuklia? Ihe niile ị kwesịrị ịma
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọkụ ọkụ emitters